Cgbọ mmiri Café | Nleta Hultsfred
hem » 🍽️ Rie & ṅụọ » AfeCafes » Cgbọ mmiri nke Café
Gaghị echefu Café Flotten mgbe ị gara na mpaghara Companylọ Ọrụ. Cafe a na-agba ndị na-enweghị uru site na mkpakọrịta yana na-enye aka na ọrụ mkpakọrịta. N'ebe a, ị nwere ike ịzụta ude ma ọ bụ kọfị nke ị nwere ike ịnụ ụtọ na rafti nke dị n'etiti Virserumsån. Nwere ike ịkwụ ụgwọ ma ego, Swish na kaadị. Nke a bụ "Old ihe", ị nwere ike ịchọta ochie ihe nile di iche iche.
Mọnde: EmechielaTuesday: Emechiela:Bọchị Wenezde: 12–17.Tọzdee: 12–17Fraịde: 12–17Bọchị Satọde: 12–17Bọchị Sọnde: 12–17
4.2 si 5.0
Nyocha 18 na Google
O di nwute na emechi, ugbu a na Mee, mepee mgbe etiti oge, enwere 2018, dị ezigbo mma, dị mma ma dị mma.
Élọ oriri na ọéụ legụ ụkwụ atọ nwere ezigbo echiche with
Kọfị mara ezigbo mma na gburugburu ebe izu ike
Ọnọdụ mara mma nke ukwuu n'akụkụ osimiri ahụ. Ọ na-emeghe naanị n'oge ọkọchị. Nri ahụ enweghị nri dị ọkụ na sandwiches, naanị achịcha ole na ole. Agbanyeghị ọmarịcha ahụmịhe.
Cafe mara ezigbo mma na ebe mara mma
2022-01-28T08:48:50+01:00🏕️ Camping, AfeCafes, Kayak|